Faayilii - Mooraa Baqattootaa Hitsaat, Tigraay
Dhaabnii baqattootaa kan Tokkummaa Mootummootaa(UNHCR) erga baatii Sadaasa darbee kaasee yeroo duraaf mooraa baqattootaa Tigraay keeessa ture Hitsats fi Shimelbaa jedhaman daawwachuuf carraa argachuu isaa beeksisee jira.
Dhaaba gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa(OCHA) waliin akka argiineetti mooraan baqattootaa lameen guutuummaatti barbada'anii jiran.
Laftii gargaarsii dhala namaa keessatti kuufamaa turees saamamee kaan immo kan manca'ee ta'u ibse.
Baatii Amajjii dabree fakkii saatalaayitiin kaasee ture san ija keenyaan arginee mirkaneeffanne kan jedhu dhaabnii baqattootaa kun mooraa Hitsats keessatti godiinni A jedhamu fi waajirri jaarmayichaa akkasumas hojjatonni jaarmayichaa kutaan keessa buufataa turan gubamanii jiran.
Nageenyii baqattoota Ertraa kanneen mooraa lameen keessaa dheessanii deemanii kan isa yaaddeessu ta;u ibsee mooraawwan lameen keessa baqattoota 20,000 ture jedha.
Kanneen keessaa 7000 caalaan miliqaniiruu ykn aangawoonni Itiyoophiyaa gargaaranii gara mooraa baqataa kanneen biroo lameenti geessanii jiru jedhee 2000 lan ta'an immoo magaalaalee adda addaa irraa nu qunnamaa jiru jedha jaarmayaan baqattootaa kan Tokkommaa Mootummootaa.